ယနေ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ တစ်ချိန် က ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ နာမည်ကြီး အသည်း ကွဲတဲ့ရောဂါသီချင်းပိုင်ရှင် အဆိုတော် လာဇရုအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ကို ပေါက် – XB Media Myanmar
နိုင်ငံကျော် တေးရေးတေးဆို တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လာဇရု ဟာ ယနေ့ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ အနုပညာလောကနဲ့ ချစ်တဲ့သူတွေကို ခွဲခွာသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ လာဇရုကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာလောကက ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ တာကို လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ကိုပေါက်ကလည်း သူ့ရဲ့
လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ စိတ်မကောင်းစာလေးရေးသားဖော်ပြထားပါ တယ်။” ကြေကွဲစရာ များနဲ့ထွက်သွားလေသူ….ဘဲကြီးရေ…ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် စ ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေ မှ တ်မိနေသေးတယ်……လာဇရုဆိုတာကို ဇော်ဝင်းထွဋ်အသံနဲ့တူလို့ စတင်သတိထားမိပြီးနောက် ခင်ခဲ့မင်ခဲ့ကြတယ်
ဒါရိုက်တာမိုးအောင် (ကိုမိုးအောင်)နဲ့အတူတူကိုလာဇရုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိဒ္ဓိရှင် ရိုက်ကူးရေး ကို ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်……ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဟေးလားဝါးလား အတူတူနေခဲ့ကြပြီးဂျီး လတ်မုတ်ဆိပ်ရိတ်ဓား ကြော်ငြာအတွက်ကျွန်တော်ရေးတဲ့သီချင်းကို ခငိဗျားဆိုပေးခဲ့တယ်……လွန် ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀ ) လောက်ကပေါ့ဘောက်ထော်က Max studio မှာ အသံသွင်းတော့ဂျမား ကအသံဖမ်းတယ်……ကျွန်တော်နဲ့ကိုဇော်မင်းသိမ်းတို့ထောင်ထားတဲ့ The Parrs band နဲ့တီး ကြတော့ ဂစ်တာ ဇော်မင်းသိန်းဘေ့စ် ကိုထွန်း ဒရမ် ဗီနိုထွန်းKB (မမှတ်မိတော့ပါ)Band မန်နေ ဂျာက
ကျွန်တော်ကိုပေါက်ဆရာစံလမ်း သမဝါယမ စင်တာမှာ ကုန်စည်ပြပွဲလုပ်တော့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ကျွန်တော်တို့တီးဝိုင်းနဲ့အတူခင်ဗျားလာဆိုသေးတယ်…….အဲ့ဒီနောက် ကျွန်တော်ကတာမွေတော င် မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းအိမ်ကိုပြောင်းတော့ ခင်ဗျားနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ရပြန်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ် လောက်က ပျော်ဘွယ်မြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲအတွက် ကိုဇော်မင်းသိန်းတို့အဖွဲ့နဲ့ ခင်ဗျားလိုက်မ လား ဆိုတော့ “လိုက်မှာပေါ့ ကိုပေါက်ကြီးကလည်း ငွေရေးကြေးရေးစကားမပြောဘူး ရှိုး
မဆိုရတာကြာလို့ ဖျဲမယ်ဗျာ”တဲ့ပျော်ဘွယ်ကပြန်လာတော့ ကျွန်တော့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးကျေးဇူးတ င်ကြောင်းပြောလာတယ်….အဲ့နေ့ကထဲက မတွေ့ဖြစ် မဆုံဖြစ် မကြားရတော့တဲ့ခင် ဗျားရဲ့သတ င်းက ပြန်ကြားရလိုက်ချိန် ရင်ထဲမကောင်းဘူးဗျာ…..ဘဲကြီးခင်ဗျား အက်တွေအရမ်းသောက် သွားတယ်နော်…..နည်းနည်းလျော့ဦးလို့ပြောတော့“လျှော့ သောက်နေပါပြီ ရေရောတာ”တဲ့…. ခင်ဗျားချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုမိုးအောင်(မိုးအောင်ရဲ့လက်ရာ)ကိုစိန်လင်း(ပုံရိပ်ရွှေ မြေ)ကိုသန်းထိုက်(ကြော်ငြာဒါရိုက်တာ)တို့ကတော့ထွက်သွားနှင့်ကြပြီ…..အခုခင်ဗျားက
သူတို့နောက်လိုက်သွားရပြန်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကောင်းရာဘုံဘဝမှာ ခင်ဗျားချစ်တဲ့ သီချင်းတွေ နဲ့နီး စပ်ခံစားခွင့်ရနေဦးမှာပါ….ကျူပ်တို့ကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ ကြေကွဲစရာတွေနဲ့အသည်း ကွဲတဲ့ ရော ဂါကိုကုဖို့ကြိုးစားပြီး ခင်ဗျားကို သတိရနေကြမှာပါ ကိုပေါက်ကြီးလို့အမြဲခေါ်တဲ့ခ င်ဗျားရဲ့ တစ်ခါက သူငယ်ချင်းကိုပေါက်” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစရာ ရေးသားထားပါတယ်။ ကဲ…ပရိသ တ် ကြီးရေ ” အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ” ၊ ” ကြေကွဲစရာ” စတဲ့ သီချင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ တေးရေးတေးဆို လာ ဇရုကို ကောင်းရာမွန်ရာရောက်အောင် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါဦးနော်…..။
ႏိုင္ငံေက်ာ္ ေတးေရးေတးဆို တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ လာဇ႐ု ဟာ ယေန႔ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ အႏုပညာေလာကနဲ႔ ခ်စ္တဲ့သူေတြကို ခြဲခြာသြားခဲ့ၿပီလို႔သိရ ပါတ ယ္။ လာဇ႐ုကြယ္လြန္သြားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႏုပညာေလာကက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွ မေတြကလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ တာကို လည္း ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုေပါက္က လည္း သူ႔ရဲ႕
လူမႈကြန္ယက္မွာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာနဲ႔ စိတ္မေကာင္းစာေလးေရးသားေ ဖာ္ျ ပထားပါ တယ္။” ေၾကကြဲစရာ မ်ားနဲ႔ထြက္သြားေလသူ….ဘဲႀကီးေရ…ခင္ ဗ်ားနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ စ ဆုံခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ မွ တ္မိေနေသးတယ္……လာဇ႐ုဆိုတာကိုေဇာ္ဝင္းထြဋ္အသံနဲ႔တူလို႔ စတင္သတိထားမိၿပီးေနာက္ ခင္ခဲ့မင္ခဲ့ၾကတယ္
ဒါ႐ိုက္တာမိုးေအာင္ (ကိုမိုးေအာင္)နဲ႔အတူတူကိုလာဇ႐ုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သိဒၶိ ရွင္ ႐ိုက္ကူးေရး ကို ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္……ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေဟးလား ဝါးလား အတူတူေနခဲ့ၾကၿပီးဂ်ီး လတ္မုတ္ဆိပ္ရိတ္ဓား ေၾကာ္ျငာအတြက္ကြၽ န္ေ တာ္ေ ရးတဲ့သီခ်င္းကို ခငိဗ်ားဆိုေပးခဲ့တယ္……လြန္ ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀ ) ေလာက္ ကေပါ့ေဘာက္ေထာ္က Max studio မွာ အသံသြင္းေတာ့ဂ်မား ကအသံဖမ္း တ ယ္……ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ကိုေဇာ္မင္းသိမ္းတို႔ေထာင္ထားတဲ့ The Parrs band နဲ႔တီး ၾကေတာ့ ဂစ္တာ ေဇာ္မင္းသိန္းေဘ့စ္ ကိုထြန္း ဒရမ္ ဗီႏိုထြန္းKB (မမွတ္မိေ တာ့ပါ)Band မန္ေန ဂ်ာက
ကြၽန္ေတာ္ကိုေပါက္ဆရာစံလမ္း သမဝါယမ စင္တာမွာ ကုန္စည္ျပပြဲလုပ္ေတာ့ အေပၚ ဆုံးထပ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တီးဝိုင္းနဲ႔အတူခင္ဗ်ားလာဆိုေသးတယ္…….အဲ့ဒီေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ကတာေမြေတာ င္ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းအိမ္ကိုေျပာင္းေတာ့ ခင္ဗ်ား နဲ႔အိမ္နီးခ်င္းေတြျဖစ္ရျပန္တယ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္ ေလာက္က ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ တန္ေ ဆာင္တိုင္ပြဲအတြက္ ကိုေဇာ္မင္းသိန္းတို႔အဖြဲ႕နဲ႔ ခင္ဗ်ားလိုက္မ လား ဆိုေတာ့ “လိုက္ မွာေပါ့ ကိုေပါက္ႀကီးကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးစကားမေျပာဘူး ရႈိး
မဆိုရတာၾကာလို႔ ဖ်ဲမယ္ဗ်ာ”တဲ့ေပ်ာ္ဘြယ္ကျပန္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့ကိုဖုန္းဆက္ ၿ ပီးေက်းဇူးတ င္ေၾကာင္းေျပာလာတယ္….အဲ့ေန႔ကထဲက မေတြ႕ျဖစ္ မဆုံျ ဖစ္ မၾကားရေတာ့တဲ့ခင္ ဗ်ားရဲ႕သတ င္းက ျပန္ၾကားရလိုက္ခ်ိန္ ရင္ထဲမေ ကာင္း ဘူးဗ်ာ…..ဘဲႀကီးခင္ဗ်ား အက္ေတြအရမ္းေသာက္ သြားတယ္ေနာ္….. နည္း နည္းေလ်ာ့ဦးလို႔ေျပာေတာ့“ေလွ်ာ့ ေသာက္ေနပါၿပီ ေရေရာတာ”တဲ့…. ခင္ဗ်ား ခ်စ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုမိုးေအာင္(မိုးေအာင္ရဲ႕လက္ရာ)ကိုစိန္လင္း(ပုံရိပ္ေ႐ႊ ေျမ)ကိုသန္းထိုက္(ေၾကာ္ျငာဒါ႐ိုက္တာ)တို႔ကေတာ့ထြက္သြားႏွင့္ၾကၿပီ…..အခုခင္ဗ်ားက
သူတို႔ေနာက္လိုက္သြားရျပန္ၿပီဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာေကာင္းရာဘုံဘဝမွာ ခင္ဗ်ားခ်စ္တဲ့ သီခ်င္းေ တြ နဲ႔ နီး စပ္ခံစားခြင့္ရေနဦးမွာပါ….က်ဴပ္တို႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေၾကကြဲစရာေတြနဲ႔ အသည္း ကြဲတဲ့ ေရာ ဂါကိုကုဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး ခင္ဗ်ားကို သတိရေနၾကမွာပါ ကိုေပါ က္ႀကီးလို႔အၿမဲေခၚတဲ့ခ င္ဗ်ားရဲ႕ တစ္ခါက သူငယ္ခ်င္းကိုေပါက္” ဆိုၿပီး စိတ္မေကာ င္းစရာ ေရးသားထားပါတယ္။ ကဲ…ပရိသ တ္ ႀကီးေရ ” အသည္းကြဲတဲ့ေရာဂါ” ၊ ” ေၾကကြဲစရာ” စတဲ့ သီခ်င္းပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ေတးေရးေတးဆို လာ ဇ႐ုကို ေကာ င္း ရာမြန္ရာေရာက္ေအာင္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါဦးေနာ္…..။
ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ သမီးလေးဆန္ဒ ပြည့်တော့မှာမို့ ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဂေါ်ဇီ လာ